ताजा मतपरिणाम- कहाँ कसले जिते ? हेर्नुहोस बिस्तृतमा | Sudurpaschim Online
ताजा मतपरिणाम- कहाँ कसले जिते ? हेर्नुहोस बिस्तृतमा
यस्तै दाङ क्षेत्रनम्बर ३ (ख) बाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)की उम्मेदवार विमला खत्री प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएकी छन् । उनले निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका केशव आचार्यलाई ५ हजार बढी मत अन्तरले हराएकी हुन् । ओलीले प्रदेशसभा २४ हजार २ सय ८६ मत ल्याइन् । कांग्रेस उम्मेदवार आचार्यले १९ हजार १ सय ८२ मत पाएका छन् ।
यता बागलुङ क्षेत्रनम्बर २ (ख)बाट प्रदेशससभा सदस्यमा राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो)का खिमविक्रम शाही विजयी भएका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को समर्थन प्राप्त शाहीले कांग्रेस उम्मेदवार जीतबहादुर शेरचनलाई २ हजार ९७ मतअन्तरले हराएका हुन् । प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित शाहीले ११ हजार २ सय ३५ मत पाएका छन् । उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार शेरचनले ९ हजार १ सय ३८ मत पाएका छन् ।
२०७४ सालको प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनमा नेकपा-राजमो गठवन्धनबाट राजमोका टेकबहादुर घर्तीले ११ हजार ८८४ मत ल्याएर निर्वाचित भएका थिए । त्यतिबेला पनि कांग्रेसबाट जीतबहादुर शेरचन नै चुनाव लडेका थिए । उनले ८ हजार ६२४ मत ल्याएका थिए । उपनिर्वाचनको मतपरिणाम अनुसार अघिल्लो प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा राजमोका घर्तीले ६४९ मत कम र कांग्रेसका शेरचनले ५२६ मत बढी ल्याएका छन् । उपनिर्वाचनमा तेस्रो बनेका समाजवादी पार्टीका अशोककुमार विकले ३१६ मत पाएका छन् । उपनिर्वाचनमा कुल ३५ हजार १८४ मतदातामध्ये २१ हजार ८९५ जनाले मतदान गरेका थिए ।
सार्वजनिक भयो उपचुनावको सम्पूर्ण नतिजा, नेकपा ३०, कांग्रेस १३ स्थानमा विजयी
कसले कहाँबाट जिते हेर्नुस् विस्तारमा